मार्केटिil पिलग्रिमको अर्थ कोपिटिसन | Martech Zone
सोमबार, नोभेम्बर 5, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
एन्डीको ब्लग, मार्केटिंग तीर्थयात्रा, पढ्नै पर्छ कि मँ धेरै समयका लागि सदस्यता लिईएको छु। मलाई पहिलो पटक याद छ एन्डीले मेरो ब्लगलाई सन्दर्भित गर्‍यो - म अविश्वसनीय चापलुसी थियो! एन्डी मेरो उत्कृष्ट उदाहरण हो जहाँ म मेरो ब्ल्ग र व्यापार केहि बर्षहरूमा रहोस्।
ब्लगि aboutको बारेमा अचम्मको कुरा यो हो कि समावेश गरिएको व्यक्तिगत टचले सँधै एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्यको लागि अनुमति दिन्छ। प्रत्येक अद्वितीय परिप्रेक्ष्यमा, यदि ती एक अर्काको भिन्नता भए पनि, जानकारीको सन्तुलन प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन आवश्यक पर्दछ। म यो crayons को एक बक्स जस्तै कल्पना ... यदि तपाईं वास्तव मा एक सही चित्र बनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंलाई केहि रंगहरु उपयोगी हुन आवश्यक छ। मैले मार्केटिंग पिलग्रिम पढें किनभने एन्डीको परिप्रेक्ष्य मेरो भन्दा फरक छ र म यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्षम छु।
यो केही व्यक्तिलाई अनौंठो लाग्न सक्छ। के हामी प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन? के हामीले पाठकहरूलाई एक अर्काबाट चोरी गर्न खोज्नु हुँदैन? पक्कै पनि होइन! मुख्य स्ट्रिम मिडियाको विपरीत जहाँ व्यक्तिहरू एक अर्कामा स्टन्ट नहुने बार्कहरू खान्छन्, ब्लगहरू हुनुपर्दछ आफ्नो हाम्रो मन छैन, दिल मा चासो। हामी बुझ्दछौं, यदि यसको मतलब प्रतिस्पर्धा टिप्स गर्ने भए पनि, यसले हाम्रा पाठकहरूलाई उनीहरू बढ्नको लागि आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ। त्यो मूल्य हो र यो पारदर्शी हो, थप विश्वास निर्माण गर्दै र पाठकहरूलाई प्रथम राख्छ।
तल लाइन: यदि तपाईं मेरो ब्लगको सदस्यता लिईरहनु भएको छ भने, तपाईं एन्डीको पनि सदस्यता लिनु पर्छ!
नोट: Coop प्रतियोगिता आर्थिक प्रोत्साहन बिना आउँदैन, कि त। म आशा गर्दैछु $ 500 कि एन्डी जीत त्यहाँ बाहिर राख्दै छ! 🙂
टैग: विश्लेषणसामग्री लेखकहरुखरीद सामग्रीसामग्री खरीद गर्दैउपकरण
नोभेम्बर २०, २००। 5::2007 अपराह्न
यो ब्लग पोष्ट मेरो लागि प्रेरणादायक थियो किनकि म ब्लग सहित केहि नयाँ वेब साइटहरू विकास गर्न काम गर्दैछु। म प्रतिस्पर्धाको कारण सुरु हुनको लागि अलि अलि डराएको छु, तर मैले तपाईंको सहित धेरै पोस्टहरू पढेको छु जसले मलाई सुरू गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्। मलाई लाग्छ कि धेरै प्रतिस्पर्धी साइटहरुको लागी पर्याप्त ठाउँ छ, र मैले मेरो पाठकहरु लाई सक्दो राम्रो गर्न ध्यान दिन जरुरी छ। यस तरीकाबाट, मेरो ब्लग स्वाभाविक रूपले सफल हुनेछ किनकि यो उपयोगी र मूल्यवान छ।
धन्यवाद डग! म सहमत छु, त्यहाँ जानको लागि प्रशस्त प्रेम छ!